Afar Nin Oo Budhcad Ah Oo Soo Xidhay Wajiga Mohamed Salah Oo Xabsi La Dhigay Iyaga Oo Fal Tuugo Ah Ku Jiray. - Gool24.Net
Afar Nin Oo Budhcad Ah Oo Soo Xidhay Wajiga Mohamed Salah Oo Xabsi La Dhigay Iyaga Oo Fal Tuugo Ah Ku Jiray.
Dalka Masar waxa uu Mohamed Salah ka yahay halyay sumcad wayn ku leh isla markaana haysta qadarinta quluubta malaayiinta dalkiisa Egypt laakiin haddana afar nin oo soo xidhay maaskaarada wajiga Salah ayaa xabiga loo taxaabay.
Afartan nin ayaa wajiga Mohamed Salah u adeegsaday in ay wax ku dhacaan isla markaana ay ujeedadoodu ahayd in aan aqoonsigooda la garan intii ay xatooyada ku jireen.
Afartan nin oo wajigooda ku soo xidhay maskiga Mohamed Salah ayaa dhactooyo u gaystay goob ganacsi waxaana qabtay kamarad iyaga oo sumcadii wajiga Mohamed Salah bahdilay waxaana la dhigay xabsiga.
Afartan nin ayaa la shaaciyay in ay ahaayeen kuwo hubaysan isla markaana wajiga ku soo xidhay maaskaarada Mohamed Salah si ay aqoonsigooda u aqiriyaan balse fashil wayn iyo xabsi ayay kula kulmeen.
Afartan nin oo lagu tilmamay in ay ahaayeen rag budh cad ah oo hubaysan ayaa magaalada caasimada Qaahira ee dalka Masar lagu xidhay kadib markii ay dhaceen bakhaar ama Store ku yaal magaalada Nasr City ee u dhaw Qaahira waxayna gaysteen dhactooyada iyaga oo ku hoos dhuumanaya sawirka wajiga Mohamed Salah.
Dhacdadan ayaa la shaaciyay in ay ka dhacday Hassanein Heikal Street oo ku taal magaalada Nasr City oo daris la ah caasimada dalka Masar ee Qaahira, laakiin nasiib darada raggan ku habsatay ayaa noqotay in booliisku ay dhamaantood gacanta ku soo xigeen.
Mohamed Salah oo dalka Masar ka ah xidiga ugu saamaynta badan isla markaana loo tixgaliyo shaqsiyaadka guud ahaan Egypt ugu saamaynta badan ayay raggani u adeegsadeen in ay ku dhuuntaan balse waxaa loo taxaabay xabsiga.
Afartan nin ee soo xidhay wajiga Mohamed Salah ayaa markii ay ka war heleen in booliisku ay ku soo dhawaadeen waxay isku dayeen in ay baxsadeen laakiin ugu danbayn xoogaga booliiska Masar ayaa gacanta ku soo dhigay.
Waxaa la filayaa in maxkamad la soo taagi doono tuugtan dhacdooyada heerka sare ah iskugu dayay in ay wajiga Moahamed Salah ay dhactooyo wayn ku sameeyaan.